Madaxweynaha dowlada Puntland oo u safray Itoobiya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha dowlada Puntland oo u safray Itoobiya
August 17, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Madaxweynaha oo ay garoonka kusii sagootiyeen, madaxweyne ku xigeenka iyo masuuliyiin kale oo dowlada ah. Sawirka: xafiiska warfaafinta madaxtooyada.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Arbaco ah u safray dalka Itoobiya.
Madaxweynaha ayaa waxaa safarkiisa Itoobiya ku waheliyay xubno kamid ah golaha xukuumada.
Madaxweyne Cabdiweli ayaa ka hor intii aanu ka amba bixin garoonka diyaaradaha kumeel gaarka ah ee Konooko waxa uu warbaahinta u sheegay in uu dalkaasi u aadi doono hawlo shaqo oo ay ka mid tahay dhammaystirka wadahadalo u socdey dawladda Puntland iyo dawladda Itoobiya oo la xiriira iskaashiga dhinacyada ganacsiga iyo ka hor tagga xag-jirnimada.
“Maanta waxaan safar shaqo oo dhowr beri ah u aadi doonaa magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya, oo aan u aadayo dhammaystirka hawlo qabyo ah oo muddo noo soo socdey oo ay ka mid tahay iskaashiga ganacsiga, Nabad-gelyada iyo ka hor tagga argagixisada oo labada dawladoodba ku ah dhib joogto ah” ayuu yiri Madaxweyne Cabdiweli.
Bandhig buugeed ka furmay magaalada Muqdisho
Muqdisho-(Puntland Mirror) Xubnaha cusub labada aqal ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa la filayaa maanta oo Sabti ah in ay ku kulmaan Muqdisho. Inta uu kulanku socdo, xildhibaanada ayaa sameyn doonaa guddiga doorashada afhayeenada cusub [...]